Fursadaha loogu talagalay Ku-xirnaanta DVR-ga A / V
Ku xiridda DVR-gaaga A-ka-qaadahaaga
Sida Loo Helo Soonaha Ugu Fiican ee Suurtogalka ah
Haddii aad rabto in aad ka faa'iideysato fiilooyinka dhejiska ah iyo calaamadaha dayax-gacmeedka, waxaad u baahan tahay wax ka badan oo kaliya DVR si aad sidaas u sameyso. Iyadoo qalabka bixiyahaaga, TiVo ama HTPC ay bixin karaan fiidiyowga tayada muuqaalka HD, inta badan HDTV ma caawin karto marka ay ku ciyaareyso dib u soo celi 5.1 aaladda dhawaaqa. Sidaa awgeed, waxaad u baahan tahay qaadashada A / V. Halkan waxaan ku dabooli doonaa siyaabo kala duwan oo lagu xirayo qalabkaaga DVR qalabka kale ee qalabka guriga si uusan kuu siin kaliya sawirka ugu fiican, laakiin tayada codka ugu fiican.
HDMI , ama Isku-Duubashada Muuqaalka Heerka Sare, waa habka loo isticmaalo hal kabaan si ay si halis ah u gudbiyaan macluumaadka maqalka iyo fiidiyowga. Halbeeggani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku xirto DVR-gaaga qaadashada A / V iyo ka dibna TV-gaaga. Codka waxaa wax ka qabta qofka soo qabta kaas oo markaa ka gudbiya fiidiyowga on HDTV-gaaga.
Sababtoo ah waxaad u baahan tahay hal kabi oo u dhexeeya qalabka, HDMI waa mid ka mid ah qaababka ugu sahlan ee helitaanka qalabka ugu fiican iyo fiidiyoowga qalabkaaga. Inkastoo ay tahay sida ugu fudud, waxay sidoo kale soo bandhigi kartaa arrimaha. Haddii aan dhamaan qalabkaaga ay heystaan ​​HDMI, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho xiriiro kala duwan oo u dhexeeya dhammaan qalabkaaga. Inta badan aqbalayaasha A / V ma beddeli karaan digital si analog. Haddii aad leedahay telefishinno da 'weyn oo kaliya oo leh qaybo wax-soo-saarka, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad isticmaasho fiilooyinka wax lagu dhejiyo ee u dhexeeya DVR iyo alaab-qaadaha A / V.
Qeyb ka mid ah Optical (S / PDIF)
Qaabka labaad ee isku xirka DVR-gaaga ee alaarmigaaga A / V waa inuu isticmaalo cabirrada wax lagu duubo ee fiidiyowga iyo cable-ka ( S / PDIF ) ee codka. Iyadoo la adeegsanayo fiilooyinka wax lagu xiro macnaheedu waa fiilooyin badan oo dheeraad ah, waxaa laga doorbidayaa waqti ka waqti, gaar ahaan qalabka waaweyn ee taageeri kara HD laakiin aan laheyn isku xirnaanta HDMI.
Kabelida muuqaalku waxay ku siin doontaa 5.1 lambarka codka haddii ay ku siiso ilaha aad ka daawato wakhtiga. Nasiib wanaag, waxaad u baahan tahay oo kaliya hal kabel hal sahlan markaad si toos ah ugu gudbi karto alaabtaada A / V. Looma baahna inaad ku xirto codkaaga TV-gaaga ilaa aad isticmaalayso kuwa ku xiran kuwa ku xiran alaabtaada si aad u ciyaarto.
Qeyb ka mid ah Coaxial (S / PDIF)
In kasta oo laba xirmooyin aad u kala duwan, isku dhafan iyo indhaha ayaa sameeya isla shaqada. Mid kastaa wuxuu u gudbin doonaa 5.1 dhawaaqa wareega ah ee ay bixiso kabixiye ama bixiyaha dayax-gacmeed si aad u qaadato A / V. Weli waxaad isticmaali kartaa fiilooyinka sheyga si aad u gudbiso fiidiyowga DVR-gaaga alaab-qeybiyahaaga ka dibna ku sii socota TV-gaaga.
Marka ay timaado HD video, waxaad haysataa dhowr fursadood oo kale iyadoo ku xiran qalabka gurigaaga. Qaar ka mid ah HDTV-yada iyo kuwa A / V ayaa bixiya xiriirka DVI, oo sida caadiga ah laga helo kombiyuutar. VGA sidoo kale waxay noqon kartaa ikhtiyaarka ku xiran qalabkaaga.
Maqalka, HDMI, aragti iyo qalab ayaa runtii ah ikhtiyaarada kaliya ee la heli karo marka ay timaado 5.1 dhawaaqa wareegsan. Waxaa suurtogal ah in lagu xiro qalabkaaga A / V qalabka kale adoo isticmaalaya xiriirada shakhsiyeed ee kan kasta, hase yeeshee kuwani waa dhif in laga heli karo nidaamka macaamiisha DVR.
Xaqiiqda Isku-Duubka Muuqaalka Muuqaalka (HDMI) Xaqiiqooyinka
Ilaalinta Kopya Sawirada iyo DVD Diiwaangelinta
Panasonic Relaunches Technics Brand ee IFA ee Berlin
Baro wixii ku saabsan HDCP iyo Arimaha La Xiriira
Diiwaanka DVD-yada ma duubi karaa DVD-yada kaliya ee maqalka ah?
Maxay tahay inaan u baahdo inaan xirto muraayado gaar ah si aan u daawado 3D?
Diiwaanada Digital TV ee VCR
Tilmaamaha Xarunta Ogeysiiska iPadka
Xatooyada Xatooyada Awood-Gaadh ah IV Xiddigaha: Xbox 360
Sida Loo Badbaadiyo Qalabka Lagu Qaadi Karo
Xayeysi weyn oo weyn: Satechi Bluetooth Smart Selfie Arm
6-Wii Caanka ah ee Wii Caanka ah
Waxa la Yidhaahdo Marka La Joogo Gurigaaga Internet Xirfadaha
Bedelista Naqshada Kala Soocista Calaamadaha Xogta
Adegidda Saamaynta Sawirrada si loo hagaajiyo Xawaaraha PC-ga
Maxay Isku-kalsoon tahay? Hantidu waxay u egtahay in mulkiilayaasha Smartphone ay jecel yihiin
Talo-tallaabo tallaabo ah oo lagu isticmaalo Isticmaalka Talaabada Isku-duubnaanta Linux
Iskudhafid la'aanta Nessus
Telefoonada Internetka ee Internetka ah
126 Noocyada Lacagta Dahabiga ah ee La Wareegeyn karo ee loogu talagalay Photoshop
Ku dheji cusbooneysiinta iPhadka iyadoon la xiriirin iTunes
Sida loo Isticmaalo Habka Browsing Muuqashada ee Google Chrome
Jooji Dadku Inay Helaan Cinwaankaaga Gmail
Lixda Sababood ee ugu Diyaargaroobka ah
TweetDeck iyo HootSuite: Waa Maxay Fiican tahay?
Dib u eegista Blogger sida Platformging Blogging
Sidee loo qoraa qoraalka ama hoos u dhigista Heerka xayeysiiska ee iPhone
Kaararka Aqoonsiga Qarsoodiga - Sida Loogu Noolaado Naftaada
Tilmaamaha Qaadashada Kaarka Sawir-qaadaha